Gịnị Ga-eme Okpukpe Ndị E Nwere n’Ụwa A? | Ozi Ọma
1. Okpukpe niile hà dị mma?
N’ọtụtụ okpukpe taa, e nwere ndị ji obi ha niile chọọ ife Chineke. Chineke na-ahụ ha, ọ na-echekwa banyere ha. Ma, ọ dị mwute na ụfọdụ ndị ejirila okpukpe na-akpa arụ. (2 Ndị Kọrịnt 4:3, 4; 11:13-15) Akụkọ ndị anyị na-anụ taa gosiri na ụfọdụ ndị okpukpe so ná ndị ji bọmbụ atụgbusi ụmụ mmadụ. Ụfọdụ n’ime ha kwa so alụ agha ndị a na-alụ taa. E nwekwara ndị nke na-edina ụmụaka. Ihe a niile ha na-eme na-ewute ndị ji obi ha niile na-eme uche Chineke.—Gụọ Matiu 24:3-5, 11, 12.
Ezi okpukpe na-eme ihe dị Chineke mma. Ma, okpukpe ụgha na-akpasu ya iwe. Ha na-akụziri ndị mmadụ ihe ndị na-adịghị na Baịbụl. Ha anaghị agwa ndị mmadụ eziokwu gbasara Chineke na ihe na-eme mmadụ ma ọ nwụọ. Ma, Jehova chọrọ ka ndị mmadụ mụta eziokwu banyere ya.—Gụọ Ezikiel 18:4; 1 Timoti 2:3-5.
2. Gịnị ga-eme okpukpe ndị e nwere n’ụwa?
E nwere okpukpe ndị na-asị na ha hụrụ Chineke n’anya, ma ihe ha hụrụ n’anya n’eziokwu bụ ụwa Setan. Obi kwesịrị ịdị anyị ụtọ na ihe okpukpe ndị ahụ na-eme anaghị emegharị Chineke anya. (Jems 4:4) Baịbụl kpọrọ okpukpe ụgha niile “Babịlọn Ukwu ahụ.” Ebe e si nweta aha ahụ bụ n’obodo oge ochie a na-akpọ Babịlọn. Ọ bụ ebe ahụ ka okpukpe ụgha malitere mgbe Iju Mmiri ahụ e nwere n’oge Noa gachara. N’oge na-adịghị anya, Chineke ga-ebibi okpukpe niile na-eduhie ndị mmadụ ma na-emekpọ ha ọnụ. Ọ ga-ebibi ha mgbe ha na-atụghị anya ya.—Gụọ Mkpughe 17:1, 2, 5, 16, 17; 18:8.
Ihe ọzọ bụ na Jehova echefughị ndị niile ji obi ha na-achọ ife ya n’agbanyeghị na ha ka nọ n’okpukpe ụgha. Ọ na-akụziri ha eziokwu ndị dị na Baịbụl ma na-akpọbata ha n’ọgbakọ ya.—Gụọ Maịka 4:2, 5.
3. Gịnị ka ndị chọrọ iji obi ha niile fee Chineke kwesịrị ime?
Ezi okpukpe na-eme ka ndị mmadụ na ibe ha dịrị n’udo
Jehova echefubeghị ndị na-agba mbọ ime ihe ziri ezi. Ọ na-agwa ha ka ha si n’okpukpe ụgha pụta. Ndị hụrụ Chineke n’anya na-agbanwe àgwà ọjọọ ha ma na-eme ihe dị ya mma.—Gụọ Mkpughe 18:4.
Mgbe ndịozi Jizọs na-ezi ozi ọma n’ụwa, e nwere ndị ezigbo mmadụ gere ha ntị. A kụziiri ha otú Jehova chọrọ ka ụmụ mmadụ si na-efe ya, ha anabata ya. Nke a mere ka ndụ ha ka mma, ha enweekwa olileanya ịdị ndụ ebighị ebi. Anyị kwesịrị ịnabata ozi ọma a na-ezi anyị taa, kwesịkwa idewe ofufe Jehova n’ihe mbụ ná ndụ anyị otú ahụ ha mere.—Gụọ 1 Ndị Tesalonaịka 1:8, 9; 2:13.
Jehova na-anabata ndị niile hapụrụ okpukpe ụgha ma bata n’ọgbakọ ya. Ọ bụrụ na ị bata n’ọgbakọ Jehova, gị na ya ga-adị ná mma. Ị ga-esozi ndị Chineke, ndị hụrụ ibe ha n’anya. Ị ga-enwetakwa ndụ ebighị ebi.—Gụọ Mak 10:29, 30; 2 Ndị Kọrịnt 6:17, 18.
4. Olee otú Chineke ga-esi mee ka ndị mmadụ nwee ọṅụ n’ụwa niile?
Mbibi a ga-ebibi okpukpe ụgha bụ ozi ọma. Ọ ga-eme ka a kwụsị ịna-emegbu ndị mmadụ n’ụwa niile. Okpukpe ụgha agaghịzi na-eduhie ndị mmadụ ma ọ bụ mee ka ndị mmadụ na-akpọ ibe ha asị. Ndị niile bi n’ụwa ga na-efe naanị otu ezi Chineke.—Gụọ Mkpughe 18:20, 21; 21:3, 4.
mailto:?body=Gịnị Ga-eme Okpukpe Ndị E Nwere n’Ụwa A?%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1102012194%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Gịnị Ga-eme Okpukpe Ndị E Nwere n’Ụwa A?